ပထမအဆင့်မှာတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ဒုတိယအဆင့်သည်ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည် - ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းခလုတ် - မာတင်ဗရီးလန်
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	နိုဝင်ဘာလ 10 2019 အပေါ်	• 23 မှတ်ချက်
'နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာတုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတွေကသတင်းပို့တဲ့ခလုတ်ကိုတကယ်ဝတ်သင့်တယ်။ ဒတ်ခ်ျတုပ်ကွေးဖောင်ဒေးရှင်း (NIS) မှဥက္ကchairman္ဌ Ted van Essen ကဤအချက်ကိုယုံကြည်သည်။ ဒါဟာလူနာတွေအတွက်အားရှိစရာပဲ” လို့သူကပြောပါတယ်။ RTL သတင်းကယနေ့သတင်းပို့သည်။ မည်သည့်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခလုတ်များကိုယခင်ကမြင်ဖူးပါသလဲ။ မင်းမှတ်မိလား ထိုကြယ်များသည်ကြယ်များဖြစ်ကြပြီးထိုကြယ်များသည်ဝင်ရောက်စီးနင်းခြင်းကိုမခံရရန်မည်သူနှင့်ဝေးဝေးနေရမည်ကိုလူတိုင်းသိရန်သေချာစေသည်။ ယခုသမိုင်းကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းအချို့သည်အတုအယောင်များဖြစ်နေပြီ။ ယခုစစ်အစိုးရ၏ခေါင်းဆောင်သည်ယနေ့ထိအာဏာရဆဲအဖွဲ့မှရန်ပုံငွေရရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယခုသိကြပြီ။ နာဇီခေါင်းဆောင်များသည် Prince Bernhard မှအာဂျင်တီးနားသို့အခမဲ့သွားခွင့်ရသည့်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဟစ်တလာ၏ဒုံးပျံအထူးကု Werner von Braun ကို NASA ဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းမှာအကြောင်းပြချက်မရှိပေ။
ထိုအချိန်မှစ၍ ခရီးသည်စာရင်းကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိသေးပါ၊ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ သွားကြောင်းလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးသက်သေအထောက်အထားများမှာအနည်းဆုံးသော်လည်းကောင်း၊ အနည်းဆုံးသော်လည်းကောင်းတင်ပြရန်ခက်ခဲသော်လည်းအာဂျင်တီးနားရှိထိန်းသိမ်းထားသည့်မော်ကွန်းတိုက်တွင်ခရီးသည်စာရင်းရှိသေးသည်မှာနာကျင်စွာပင်ထင်ရှားပါသည်။ နာဇီဂျာမနီမှအငြင်းပွားဖွယ်ရှိသောကိန်းဂဏန်းများကို KLM မှ Zurich မှ Buenos Aires သို့သယ်ဆောင်သွားသည်ကိုငြင်းဆို။ မရနိုင်ပါ။ နာနုန်ခေတ်ကဗိသုကာပညာရှင်ဘားနတ်ဟယ်ဖရစ်ခ်ျကဲ့သို့သောအမည်များသည် Peron အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ထိုနေရာတွင်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ Helfrich သည် 25 ဇူလိုင်လ 1947 တွင်ဥရုဂွေးသို့ (Prince Bernard အမည်ဖြင့်သမုတ်ထားသော) Zurich မှ KLM လေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာပြီးထိုမှတဆင့်အာဂျင်တီးနားသို့လှေဖြင့်ထွက်ခွာသည်။ Juan Peron သည် 1946 နောက်ပိုင်းအာဂျင်တီးနားသမ္မတဖြစ်သည်။ သူသည်ဟစ်တလာနှင့်နာဇီဂျာမနီအပေါ်သူ၏စာနာမှုကိုဘယ်တော့မျှမဖုံးကွယ်ခဲ့ပါ။ အာဂျင်တီးနားတွင်ဂျာမနီယူနီဖောင်းဝတ်ထားသောအာဂျင်တီးနားစစ်သားများသည်လမ်းများပေါ်ချီတက်လာပြီးစစ်အပြီးတွင်နာဇီရာဇ ၀ တ်သားများကိုအာဂျင်တီးနားတွင်လက်ခံကြိုဆိုကြသည်။ သူတို့သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်သူတို့၏ငွေများကိုကြိုဆိုခြင်းထက်ပိုမိုသောတိုင်းပြည်တွင်သူတို့မကြာခဏနည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတဖြင့်ကောင်းစွာအသုံးချနိုင်ခဲ့သည်။
နယ်သာလန်သည်ဥပမာ၊ ရထားလမ်းလုပ်ငန်းတွင်အာဂျင်တီးနားနှင့်ကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Prince Bernhard သည် Peron ၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ မင်းသား Bernhard သည် Bilderberg အုပ်စုကိုတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီးအကြောင်းမှာအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ Adolf Hitler နှင့်ဥရောပအင်ပါယာကြီး၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်တူညီသောရည်မှန်းချက်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Klaus Barbie၊ Adolf Eichman၊ Jozef Mengele၊ Horst Deckert, Rüdiger Schultz ကဲ့သို့သောဘုရားငယ်များကိုအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှကြိုဆိုသည်။ Bernhard ၏မိတ်ဆွေနိုင်ငံ။ ဒုတိယနှစ်ခုသည်အာဂျင်တီးနားတွင်တွေ့ရသော KLM ခရီးသည်စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ထိုစဉ်ကအမေရိကန်အစိုးရသည် KLM အားသူတို့၏ခရီးသည်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နာဇီဒုက္ခသည်များသည်ဆွစ်ဇာလန်အခြေစိုက်ခရီးသွားအေဂျင်စီမှတစ်ဆင့်ဆွစ်ဇာလန်အခြေစိုက်ခရီးသွားအေဂျင်စီမှတစ်ဆင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာများသို့ခရီးသွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ နာဇီတွေအားလုံးကိုကြိုဆိုတာထက်ပိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတုအယောင်တစ်ခုလို့ပဲသုံးသပ်ကြည့်ရအောင်။ အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ၏တက်လာမှုနှင့်ပြိုလဲမှုသည်အစီအစဉ်တစ်ခုတည်းအတွက်သာကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကြွေးမြီရှုပ်ထွေးမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်6သန်း၏လူ ဦး ရေအုပ်စုသည်အကြီးအကျယ်ဖိနှိပ်ခံရခြင်းကြောင့်မတည်ငြိမ်မှုအခြေအနေနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ် (နှင့်ဘီလီယံနှင့်ချီသောထောက်ပံ့မှုများ) ရရှိခဲ့သည်။
အဘယ်သူသည်အနည်းငယ်အားထုတ်မှုစေသည် အရာရှိတ ဦး ကသမိုင်း၏မူဘောင်အပြင်ဘက်မှာ တူးဖော်ရန် Winston Churchill ၏နှုတ်မှကျွန်ုပ်တို့ကြားခဲ့ရသောတစ်ခုတည်းသောအမှန်တရားမှာအောက်ပါဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကိုအောင်နိုင်သူမှရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မင်းသားသည် IG Farben (နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီ) တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအရာဟုထင်သည်။ Hitler ၏နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကို Juliana နှင့် Bernhard တို့၏မင်္ဂလာဆောင်တွင်ပေးခဲ့သည်။
ဒတ်ခ်ျမင်းသား Bernhard ကိုလည်းရေတွက်နိုင်သည့် Lippe ၏အိမ် (အမှန်တကယ်အားဖြင့်ရေတွက်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ဦး လေး၏မျက်နှာသာပေးမှုကြောင့်) \_ t Furst 1916 မှမင်းသားအဖြစ် Leopold van vanpe သည်နာဇီပါတီသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ မိမိအစံအလုပ်၌တည်၏ Royals နှင့် Reich, နာဇီဂျာမနီရှိ Hessen ၏မင်းသား (2006) Jonathan Petropulous သည် Lippes အောက်တွင်နာဇီနှစ်ဆယ်ထက်မနည်းသောနည်းကိုတူးသည် (ထို့နောက်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မင်းသား Bernhard ကိုအဆင်ပြေစေရန်ထည့်သွင်းရန်မေ့နေသည်) ။ ၎င်းနှင့်အညီအမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောကျားမကွဲပြားမှုကိုအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၏အဓိကထောက်ပံ့သူအဖြစ်လုံခြုံစွာခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ သိသာထင်ရှားသည့်အစောပိုင်းက 1928 တွင်၊ NSDAP နှင့် Liph's ပလ္လင်ကိုတက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော Bernhard ၏ဝမ်းကွဲ Ernst zur Lippe ၏ SA တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်နာဇီရာထူးတွင်ပထမဆုံးအရာရှိ Erbprinz ဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်မမျှော်လင့်သောသမိုင်းနိဒါန်းကိုရှာတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်နိုင်သော်လည်းအထက်ဖော်ပြပါသည်ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်အခြေအနေတွင်သက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ပြင်းထန်သော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောရေရှည်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာမိမိတို့၏ရန်သူကို alibi အဖြစ်ဖန်တီးသောမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်သွေးအုပ်စုအဖွဲ့ကကမ္ဘာကြီးကို ဦး ဆောင်သည်ကိုစာဖတ်သူအားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်စေရန်ကြိုးစားသည်။ ငါ့စာအုပ်အသစ်) ။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်ပထမကမ္ဘာစစ်သည်အော်တိုမန်အင်ပါယာကိုချိုးဖျက်ရန်နှင့်ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေကိုအစ္စရေးနိုင်ငံအတွက်သီးသန့်ထားရန်အသုံးပြုသည်ကိုတွေ့မြင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကို Balfour ကြေငြာချက်နှင့် Sykes-Picot စာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည် ဤတွင်မှတ်စု) ။ ထို့နောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သည်အစ္စရေးနိုင်ငံကိုအလျင်အမြန်တည်ထောင်ခြင်းကိုမတားဆီးရန်ကူညီခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တစ်ကမ္ဘာလုံးသည်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံနေရသောအုပ်စုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 1948 မှာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုဖန်တီးတာကတကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်မှစ။ အစ္စရေး၏သြဇာအာဏာနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသိသိသာသာတိုးပွားလာပြီးအမေရိကန်သည်ပါလက်စတိုင်းလူ ဦး ရေ၏ကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့်အမေရိကန်သည်အကြီးဆုံးဘဏ္financာရေးထောက်ပံ့သူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာသည်အင်အားတောင့်တင်းသောနေရာတွင်ပင်သူ့ကိုအာဏာရှင်နေရာမှဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့်ဖက်ဆစ်ဝါဒကိုဒီမိုကရေစီဂျာကင်အင်္ကျီတွင်ပိုမိုနူးညံ့သောဗားရှင်းဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။
1954 တွင် Socialist (နှင့် Freemason) ဂျိုးဇက် Retinger နှင့် Prince Bernhard တို့၏လျှို့ဝှက် Bilderberg အုပ်စုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဦး ဆောင်ကောင်စီတွင် Robert Ellsworth (Lazard Freres = Rothschild)၊ John Loudon (NM Rothschild) Paul Nitze (Schroeder Bank), CL Sulzberger (New York Times), Stansfield Turner (နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်စီအိုင်အေဒါရိုက်တာဖြစ်လာခဲ့သည်)၊ Peter Calvocoressi၊ ဒန်နီယယ်အယ်လ်ဘာ့ဂ်၊ Andrew Schoenberg (RIIA) နှင့် Henry Kissinger
ပထမ ဦး ဆုံး Bilderberg အဖွဲ့၏လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးပွဲကို 29 မှမေလတွင် 31 သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Oosterbeek ရှိ Bilderberg ဟိုတယ်၌ 1954၊ အဖွဲ့သည် ၄ ​​င်းတို့၏အမည်ကိုပေးအပ်သောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ဥရောပအသိုင်းအ ၀ ိုင်း၏ဒီဇိုင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂသည် Bilderberg အုပ်စု၏ပုံဆွဲဘုတ်မှလာသည်။ ထို့ကြောင့်ဥရောပအသိုင်းအဝိုင်း၏ပထမဆုံးသမ္မတဟောင်းသည်နာဇီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်းသပိတ်မှောက်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ Walter Hallstein သည်နာဇီ "ဥပဒေကာကွယ်သူများ" ၏အသင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးနာဇီ / ဂိုဏ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ဥရောပ၏တရားဝင်မှတ်တိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Hallstein သည် Frankfurt တက္ကသိုလ်မှဥပဒေနှင့်ဘောဂဗေဒပါမောက္ခဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဓာတုဂိုဏ်းချုပ်နှင့်အဓိကနာဇီငွေကြေးထောက်ပံ့သူ IG Farben ရှိခဲ့သည်။ သူသည် 1958 မှ 1967 သို့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကwas္ဌဖြစ်ခဲ့သည်။
ယုန်တွေဘယ်လိုပြေးနေတယ်ဆိုတာနဲ့ကြည့်ရတာအင်အားစိုက်ကွင်းတစ်ခုတည်းမှာပဲရှိနေပေမယ့်မတူညီတဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီမှာကြည့်ရတာအရမ်းအသုံးဝင်တယ်။ ဟစ်တလာအားကုန်းတွင်း၌ငွေကြေးထောက်ပံ့သူများသည်အာဏာဆက်လက်ရှိနေသေးသူများဖြစ်သည်။ ဖက်ဆစ်ဝါဒ၏ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလီယန်စကားပြောဂျက်ကတ်ဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ ၎င်းတွင်ဖက်ဆစ်ဝါဒီများအားလုံးမေတ္တာပါစွာထုပ်ပိုးထားသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုစခန်းများ GGZ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းဟုခေါ်ကြသည်; ပြန်လည်ပညာရေးစခန်းများကိုလူငယ်စောင့်ရှောက်မှုဟုခေါ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းနှင့်လူများအား၎င်းတို့၏နေအိမ်များမှထွက်ခွာရန်တံခါးခုံတိုင်းကိုဖယ်ရှားသည့်ဥပဒေပြဌာန်းခြင်းများဖြင့်ယနေ့ ၀ င်စီးစီးနင်းခြင်းကိုပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ ဟစ်တလာအစိုးရသည်ဖက်ဆစ်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင်၎င်းမှာထုပ်ပိုးပြီးသားဖြစ်ပြီးယူနီဖောင်းနှင့်သေနတ်များကို GGZ သူနာပြုပစ္စည်းများနှင့်ဆေးထိုးအပ်များဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ နာဇီအုပ်ချုပ်ရေးကို David Star မှတစ်ဆင့်ရှင်းလင်းစွာတံဆိပ်ကပ်ခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ဆန့်ကျင်ဘက် (နှင့်လျှို့ဝှက်စွာရည်ရွယ်ထားနိုင်သည်) အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။သင့်အားသားကောင်ဖြစ်စေဘာပဲဖြစ်ပါစေ၊" အဲဒီဖော်ပြချက်ကိုသေချာစဉ်းစားပါ။
အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာတွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည့်ဝါဒဖြန့်ချိရေးဌာနရှိခဲ့ပြီးစစ်အစိုးရသည်စစ်တပ်မှစစ်ရေးအရရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည့်နေရာတွင် Orwellian မိန့်ခွန်းအသစ်လည်းထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တပ်သည်စစ်မြေပြင်တွင်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တပ်ကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ တကယ်တော့လူ့အဖွဲ့အစည်းအလွှာအားလုံးမှာလျှို့ဝှက်ဖက်ဆစ်ဝါဒကိုချိုမြတဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ နာဇီတို့၏စာအုပ်ကိုမီးရှို့နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီနေ့၏မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကို Kasja Ollongren ၀ န်ကြီးဌာနမှလွဲမှားသောထင်မြင်ချက်များကိုသေသပ်စွာသပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်တိတ်တဆိတ်တွန်းအားပေးခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ နာဇီဂျာမနီလက်အောက်တွင်ဝါဒဖြန့်ချိရေးဝါဒဟုလူသိများသောအရာသည်ယခုအခါသတင်းစာပညာဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်စာနယ်ဇင်းကိုယ်တိုင်ကအကြီးစားဝါဒဖြန့်သတင်းများကိုထုတ်လွှင့်သည်ဟူသောအယူအဆကိုနိုင်ငံတော်မှအတိုက်အခံဆိုဒ်များကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်၊ သို့မှသာသင်သည်ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ကိုလက်ညှိုး ထိုး၍ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ သို့မှသာသင်သည်စစ်မှန်။ လွတ်လပ်သောဝေဖန်မှုများကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ။ ၎င်းသည်အားလုံးသည်ယခင်ကထက်များစွာပိုမိုဝေးဝေးနှင့် ပို၍ သန့်စင်သွားခဲ့သည်။ သို့သော်ဟစ်တလာ၏မြင့်တက်လာမှုကိုကူညီပေးခဲ့သည်မှာပါဝါပိတ်ပင်တားဆီးမှုပင်ဖြစ်သည်။ သူသည်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထပ်မံလဲကျသွားမည်ကိုသိပြီးထိုမူများအတိုင်းပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သောသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်အတွေးအမြင်လား။ မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်စင်ကြယ်သောအမြင်နှင့်မီးတောက်များဖြင့်လမ်းလျှောက်မည့်အစားပုံဆွဲရာတွင်အစက်များကိုချိတ်ဆက်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။
နာဇီဂျာမနီလက်အောက်တွင်အုပ်စုများ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတံဆိပ်ကပ်ခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်စစ်ပြီးနောက်ရှုပ်ထွေးမှုကိုပြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သော်လည်းယခုအခါထိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏ပြောင်းပြန်ကိုအသုံးချနေသည်။ ဂျော့အိုဝဲလ်၏ 'ပြန်လည်နုပျိုခြင်းနိယာမများ' အရအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ စောင့်ရှောက်သူများအနေဖြင့်ခလုတ်များတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်ဒတ်ခ်ျတုပ်ကွေးရောဂါဖောင်ဒေးရှင်းမှ Ted van Essen ၏အဆိုပြုချက်သည် 40 / '45 ၏စစ်အစိုးရကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိရစေသည်။ သို့သော်ထိုနေရာတွင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်သောအုပ်စုကိုတံဆိပ်ကပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခုတံဆိပ်ကို“ ကိုင်တွယ်ရန်စိတ်ချရသော” အုပ်စုကိုတံဆိပ်ကပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့ကဒီမှာလျှို့ဝှက်ဖက်ဆစ်ဝါဒကိုတွေ့မြင်ရတယ်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကိစ္စကိုအလွန်အဆင်ပြေစွာရွေးချယ်ခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူအများအပြားကကာကွယ်ဆေးသည်သာလျှင်ကောင်းသည်၊ ကာကွယ်ဆေးမပါဘဲလှည့်ပတ်သွားသူတိုင်းသည်ကပ်ရောဂါကပ်ရောဂါဖြစ်သည့်ဗုံးတစ်လုံးဖြစ်သည်ဟူသောဝါဒဖြန့်ချိသောအတွေးအခေါ်ကိုနားလည်ကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ခေတ်မီသောဝါဒဖြန့်မှုဖြင့်ဖက်ဆစ်ဝါဒအတွေးအခေါ်များကိုသက်သေထူသည်။ မီဒီယာကိုအမြဲတမ်းလူများအားလက်ခံမှုပုံစံသို့အဆင့်ဆင့်ရောက်စေရန်အမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်။ ဒီကိစ္စမှာလူမှုမီဒီယာကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္roleကနေပါ ၀ င်တယ်။ ငါ့၌ အသစ်သောစာအုပ် ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာဆွေးနွေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မယုံနိုင်အောင်ရှင်းပြရတာလဲ။
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းမပြုရန်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟူသောလူအများစုကယခုအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ထားသောကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းခလုတ်၏စိတ်ကူးကိုဝေဖန်သူများကရယ်စရာအဖြစ်မှတ်ယူကြလိမ့်မည်။ ဒီimageရိယာထဲမှာငါတို့ရဲ့အဖြစ်မှန်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဆွေးနွေးခြင်းများဖြင့်ရောင်စုံနေတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ Jeroen Pauw နှင့် Matthijs van Nieuwkerk တို့မှစားပွဲဝိုင်း guests ည့်သည်များသို့မဟုတ် Nieuwsuur မှအထူးကုများကကမ္ဘာ့အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ကိုအဓိကအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဝေဖန်မှုများမှာထိန်းချုပ်ထားသောဆန့်ကျင်ဖက်ထောင့်မှလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာနှစ်ချက်အောက်၌ဗုံးတစ်လုံးမကြာခဏရှိနေခြင်းသို့မဟုတ် 'မှန်' သို့မဟုတ် 'ပူးပေါင်းကြံစည်မှု' အမည်းစက်ကိုသာစွဲစွဲလန်းလန်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အကြီးစားတံဆိပ်ကပ်ခြင်းစတင်ခဲ့သည် (စကိုလည်းကြည့်ပါ ဤတံဆိပ်ကပ်ခြင်းပုံစံ) နှင့်ယခုဤခလုတ်ကို၏အကြံပြုချက်နှင့်အတူသေးသေးလေးထဲမှာထွက်လှိမ့်သည်။ ငါစိတ်ပူမိတာကဂျာကင်အသစ်တစ်ခုမှာဖက်ဆစ်ဝါဒဟောင်းကိုငါတို့တွေ့နေရတယ်။ နာဇီဂျာမနီလက်အောက်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ အရာအားလုံးသည်ယခုအချိန်တွင်အလွန်ချိုမြိန်။ လိုအပ်သော Orwellian စောင့်ရှောက်မှုဂါဝန်ဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည် en အလွန်တဖြည်းဖြည်းအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်
ခလုတ်တစ်ချက်တပ်ရန်စိတ်ကူးသည်ဖက်ဆစ်ဝါဒီနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်ရှိသူများကိုအိပ်ရာဘေးတွင်အမှန်တကယ်ငြင်းပယ်နိုင်ပြီးထို့ကြောင့်သူတို့၏အလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အတွေးအခေါ်များကိုပြဌာန်းရန် ပို၍ ပျော့ပျောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အတွေးခန်ဓာကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခြင်းသည်ဖက်ဆစ်ဝါဒ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။
source link ကို entries တွေကို: relay-of-life.org, trouw.nl
ဒတ်ခ်ျ Regents နာဇီအမှတ်အသားနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုလက်ခံရရှိ?
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် "ညာဘက်" Trump, United Kingdom နှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲ (နှင့်ကဆက်စပ်ဘာမှ) ၏ထိန်းချုပ်ရာဖြိုဖျက်စတင်နေပြီ
Tags:: အာဖဂန်နစ္စတန်, ကြယ်သီး, ဂျာမဏီ, အက်ဆင်း, ဖက်ဆစ်ဝါဒ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, ကာကွယ်ဆေးထိုး, တုတျကှေးနာ, Kasja, နာဇီ, နာဇီ, ဒတျချြ, Ollongren, အခြေခံအုတ်မြစ်, Ted, ကြောကျထိုးခွငျး, လိမ့်မည်
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 15: 13
ဤတံဆိပ်အသစ်များအားလုံးသည်လွတ်လပ်မှုပေးသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်အလွန်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပေလော။ COC ၀ န်ထမ်း Margriet Oosterhuis မှဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။ သူမကရယ်ရမယ်။ "ဟုတ်တယ်" ဟုသူမကအတည်ပြုပြောကြားသည်မှာ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးစေသည်၊ အကြောင်းမှာတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သေတ္တာများကိုဖယ်ရှားလိုပြီး၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်ယခင်ကထက်တံဆိပ်များပိုမိုများပြားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Martin Vrijland ကိုသတိပြုပါ။ ဤတံဆိပ်အုပ်စုသည်ဤတံဆိပ်ကိုလိင်ကွဲခွဲခြားခြင်းမပြုပါနှင့်။ "လွတ်လပ်မှု" ဟူသောစကားလုံးသည်ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ်၏မိန့်ခွန်းအသစ်၏နောက်ထပ်အံ့ဖွယ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် (ပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်) ဖယ်ထုတ်ခြင်း (ခံစားမှု) ၏သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 15: 28
ဤ Trouw ဆောင်းပါးရှိတံဆိပ်များ၏ 1 သည် 'pan' ဖြစ်သည်။
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 15: 32
ခလုတ်တစ်ခုမှဒီဂျစ်တယ်တံဆိပ်တစ်ခုသို့ခြေလှမ်း (ဥပမာ RFID ချစ်ပ်) သည်မည်မျှသေးငယ်သည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ ... အစက်တွေချိတ်ဆက်ပါ
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 23: 56
“ Smart watch” နှင့် 4G / 5G နည်းပညာမှတစ်ဆင့်အလယ်အလတ်အဆင့်တစ်ခုရှိသေးသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုကုမ္ပဏီများနှင့်စိတ်လိုကိုယ်လျောက်မျှဝေခြင်း။
သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုသင်၏ကျန်းမာရေးအာမခံသို့လွှဲပြောင်းခြင်းသည်အလွန်လုံခြုံမှုရှိသည်။ သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့သည် ASR အားသူတို့၏အပြာမျက်လုံးများတွင်၎င်းတို့သည်အပြုသဘောဆောင်သည့်မက်လုံးအတွက်အချက်အလက်များကိုသာအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နိုင်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းမည့်အခြားသီးခြား BV တစ်ခုကိုသူတို့အထူးစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည် (အဘယ်ကြောင့်အာမခံချက်ပေးမည်ကိုမည်သူရှင်းပြနိုင်မည်နည်း။ ) ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ဂူဂဲလ်တို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရေးသားမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမည်မျှလိုက်နာလေ့ရှိသနည်း။
ASR Vitality Program နှင့် ပတ်သက်၍“ စားသုံးသူအစီအစဉ်” မှလုံးဝအသေးအဖွဲမေးခွန်းများ -
ဒါကအစပဲရှိပါသေးတယ်၊ ပထမဆုံးသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ ပြီးတော့ implants နဲ့ဆေးတွေကိုခြေရာခံတဲ့ဆေးတွေ .. Regina Dugan (DARPA) ကိုကြည့်ပါ။ သူသိနိုင်တယ်
12 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 41
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 15: 36
ပို၍ ပင်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း (သွယ်ဝိုက်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ဖတ်ပါ။ ချိုသောဂျာကင်အင်္ကျီတွင်ဖက်ဆစ်ဝါဒကိုဖတ်ပါ)
အမျိုးသားကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ် (35049) တွင်မပါ ၀ င်သောကလေးများကိုခွင့်ပြုသည့်သို့မဟုတ်ကလေးခွင့်မပြုသည့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများအားရွေးချယ်ရန်မိဘများအားတိုက်တွန်းရန်ကလေးထိန်းအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန် Raemaker အဖွဲ့ဝင်ဥပဒေမှအဆိုပြုချက်။
နောက်တစ်ခုမှာ၊ အမျိုးသားကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်ပါလီမန်စက္ကူ 35049 တွင်မပါ ၀ င်သောကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများကိုရွေးချယ်ရန်မိဘများအားတိုက်တွန်းရန်ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေကိုအဖွဲ့ဝင် Raemakers မှပြင်ဆင်ရန်အဆိုပြုချက်ဖြစ်သည်။
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 23: 12
မှတ်ချက် - "သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်" သည်ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ်၏ "မင်းကိုဖယ်ထုတ်ထားခြင်း" အတွက်တောင်းဆိုချက်အသစ်ဖြစ်သည်။
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 16: 09
ထိပ်တန်းနာဇီများစွာသည်ဂျာမန် / ဂျာမန်နောက်ခံမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမှန်မှာရွယ်တူချင်းဖိအားအားလုံးသည်ဖက်ဆစ်ဝါဒမျှသာဖြစ်သည်။ အတိုက်အခံ၊ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ ထင်မြင်ချက်မရှိပါဘူး။ ဟေ့ဒီမှာနယ်သာလန်အကြောင်းပြောနေတာလား
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 17: 56
Orwelian သတင်းမိန့်ခွန်း? ဒီကိစ္စ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသဘာ ၀ သယံဇာတများကိုသင့်လျော်စွာသုံးစွဲခြင်း (ကိုလိုနီပြုခြင်းလော)၊ သဘာဝအတွက်ရပ်တည်နေသည်၊ ဟက်တာဟက်တာ။
ထိုကဲ့သို့သောအဘိုးတို့ထိသမျှ၊ တည်ဆောက်သမျှသည်သင်ကူးစက်ခံရသည်ကိုသင်သိသည်၊ သို့သော်အဖွဲ့ဝင်များကျန်ရှိနေသေးသည်။ တကယ်တော့ WWF Button of Prince မှာယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ပုံရှိရမယ်၊ အဲဒါကဘာလဲဆိုတာသင်သိတယ်။
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 21: 20
ပြီးတော့နာဇီတွေအတွက်ကတော့သူတို့ဘယ်တော့မှမဝေးတော့ဘူး၊ ပါရီဂေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်နှစ်အတန်ကြာစိတ်အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့် Reich ၏အရိပ်ပါဝါ Martin Bormann ကိုမမေ့ပါနှင့်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဘာလူစကိုနီသည်ပါရာဂွေးရှိအိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 21: 25
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 22: 57
ဗီဒီယိုသည်ထိုခေတ်ကာလ၏အကြီးမားဆုံးသောလိမ်လည်မှုကိုလျစ်လျူရှုပြီးနာဇီဂျာမနီကိုအနောက်နိုင်ငံမှဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်မှဇီယွန်ဝါဒနှင့်၎င်းနောက်ကွယ်မှထင်ရှားသောသွေးထွက်သံယိုများကကူညီခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုလည်းလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသော်သူတို့သည်နာဇီဂျာမနီကိုမိမိကိုယ်ကိုဖန်တီးသည့်ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည် (မကြာသေးမီကဆီးရီးယားရှိ ISIS အဖွဲ့သည်မိမိကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ )
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 20
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါဟာဗားစာချုပ်နှင့်ဂျူးဒနနိတ် (ဂျူးကောင်စီ) နှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်သည်။ ငွေကြေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ အန်တိုနီစီ။ ဆတ်တန်၏ "Wall Street and The Rise of Hitler" ၏လုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 42
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 46
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 08: 00
MI6 ၏ယခင်သူလျှိုဖြစ်သူ Greg Hallet မှဟစ်တလာသည်ဗြိတိသျှကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ စကားမစပ်ဟစ်တလာသည် 1e wo နှင့်အပြီး၌သူလျှိုအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်မရည်ရွယ်ခဲ့ပါ။ သူဆက်ဆက်သရုပ်ဆောင်အခွက်ရှိခဲ့ကြပေမည်။
ကောင်းပြီ, ဟစ်တလာသတ်သေခဲ့ကြပေသည်။ အဲဒါကိုမယုံနဲ့ သူ၏ DNA ကိုဘာလင်တွင်ရှိသူ၏သူ၏အလောင်းကို အခြေခံ၍ မတွေ့ရပါ။ အထွေထွေလူ ဦး ရေကိုလှည့်ဖြားရန်မီးခိုးနှင့်ကြေးမုံအားလုံး။ ဂျာမန်နှင့်စစ်မှန်သောဂျာမန်တို့ကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်စေသောဟစ်တလာ။ ဂျာမနီနေဆဲအုပ်ချုပ်သောသိမ်းပိုက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် "ဂျာမန်။ "
ဤစီမံခန့်ခွဲမှု / ဖိနှိပ်မှုပုံစံကိုဥရောပတစ်ခွင်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သာမာန်လူ ဦး ရေကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး 'အထက်တန်းလွှာ' များဖြင့်လွှမ်းခြုံထားပြီး၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်သူတို့၏အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လွတ်လပ်သည်။
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 21: 40
နေတိုးဌာနချုပ်မှာဘာတွေမှားနေလဲ တစ်ခုခု Sedes Sacrorum Schutzen Staffel?
10 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 21: 47
.. အလုပ်များနေတုံးအကုန်လုံးပြီးအောင်လုပ်မယ် ff 😉
ပါဘူသည်ဘုရှ်၏ 100,000 hideကပုန်းအောင်းနေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လှည့်စားနေသည်
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 00: 55
ထိုအဟုတ် .. သူတို့ဖတ်နှင့်တုံ့ပြန်:
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 11: 32
နောက်တတိယအဆင့်ကတော့ DNA ဒေတာဘေ့စ်ကိုယူပြီးစမ်းသပ်ဖို့ပါ။ အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်းတစ် ဦး အနေနှင့်ပါတီပါတီမှသွေဖည်သွားခြင်းသည်များလွန်းလှသည်။ သဘောထားကွဲလွဲမှုများနှင့်အခြားသွေဖည်သောဒြပ်စင်များကိုဖော်ထုတ်ရမည်။
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 11: 49
ဘာလင်တွင်မတ်လ 13 2012 အပေါ်ဒီသရုပ်၌ တာဝန်ယူယူဂျာမနီနှင့်ဥရောပရှိလူများ Rath ။ ၎င်းသည်လူများနှင့်လူများအတွက်ဒီမိုကရေစီဥရောပကိုအတူတကွတည်ဆောက်ရန်နှင့်ကုသမှုနှင့်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးအပေါ်အခြေခံသည့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံအသစ်တစ်ခုကိုအတူတကွတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်သဘာဝဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုချက်အရထိုဆေးဝါးများသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာရောဂါများကိုများစွာမျှဝေခြင်းဖြင့်လျှော့ချနိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာပြသသည်။ သို့သော်ဤ“ ရောဂါမရှိသောကမ္ဘာ” ကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်မပြုထားပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤရောဂါများသည် Pharma စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံစျေးကွက်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့နှင့်သားသမီးများအတွက်ရောဂါကင်းမဲ့သည့်ဤကမ္ဘာကိုကျွန်ုပ်တို့လိုလားလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့စည်းလုံးရမည်။ အခု!
11 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 11: 58
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အပြီးခဲ့သည့်နှစ်။
ငါပြင်းထန်စွာနှင့်ငါ့ဆရာဝန်ဖိုင်ကိုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်ပစ်ရန်တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူဒေးဗစ် Icke ကနေစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုစေလွှတ်။
လွန်ခဲ့သောအပတ်က3။
သရဖူသကျသခေံနှင့်ပြည်နယ်နှင့် proxy ရာဇဝတ်မှုအကြားဂိမ်း (ရှေ့နေ Meijering နှိုင်းယှဉ် Plasman) »
Rutger Bregman ကဖက်ဆစ်ကုလသမဂ္ဂအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်သည်
ကြီးမားသော Sinterklaas မြှင့်တင်ရေး: လှပသောထုပ်ပိုးလှပသောအံ့သြစရာ!
Zonnetje op ကုလသမဂ္ဂ၏အစီအစဉ် 2030 ကိုနားလည်ရန်သမိုင်းကိုသိထားပါ
Zandi မျက်လုံး op ကုလသမဂ္ဂ၏အစီအစဉ် 2030 ကိုနားလည်ရန်သမိုင်းကိုသိထားပါ
ကင်မရာ2op '' သကျသခေံ '' များအတွက်လူသတ်မှု Derk Wiersum နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကို၏စစ်မှန်သောဘာလဲ?
ZalmInBlik op ရဲတပ်ဖွဲ့တခုတွင်ရဲနှင့်သင်ကူညီသူများကိုရိုက်ကူးခြင်းကိုတားမြစ်သည်
ကင်မရာ2op ရဲတပ်ဖွဲ့တခုတွင်ရဲနှင့်သင်ကူညီသူများကိုရိုက်ကူးခြင်းကိုတားမြစ်သည်